Hello Town 2048 waa xujo cusub oo tirooyin badan leh | Androidsis
Ku dhis magaaladaada adoo isku daraya nambarada magaalada Hello Town 2048
Hello Town 2048 waa xujo kale oo aan caadi ahayn oo loogu talagalay Android taas oo marka laga reebo isku darista tirooyinka si aan u dhammeyno heerka, aan u dhisi doonno magaaladeena dhismayaal iyo meelo gaar ah oo leh dhammaan shilimaadka dahabka ah ee aan helno.
Ciyaar aan Isbaanish aheyn, laakiin taas oo ah Uma baahnid inaad fahanto wax badan si aad u qabsato makaanikada sidoo kale salkeeda waxaa ka mid ah. Haa waa run in laga yaabo in xirfadaha ay tahay inaan wax fahano, laakiin ma qarinayso khibrada xoogaa balwada leh ee ay dhalinayso. Aan ku gaadhno ciyaartaan cusub ee bisha Febraayo 2021.
1 Isku dar digaagga si aad u hesho lambarkaas sixirka ah ee 2048
2 Isku day hargaha cusub si aad ugu raaxeysato qaab kale magaalada Hello Town 2048
3 Halxiraale kugu xiisay
Isku dar digaagga si aad u hesho lambarkaas sixirka ah ee 2048
In kasta oo aan runta u sheegno maahan inaan sidoo kale helno, qadaadiicda aan helno waxaan awoodi doonaa inaan ku dhameystirno dhismooyinkaas taasi waa la soo saaray iyadoo aan dhameyneyno heerarkii hore.
Ciyaar dhisme ku dhow taas oo wuxuu nagu dhiirrigelinayaa inaan ku ciyaarno heerarkaas taayirradaas lambarro ahaan. Taasi waa in la yiraahdo, tirooyinka waxaa loo kala soocaa si aan kala sooc lahayn oo ay tahay inaan hoos ugu dhigno 5 tiirar.
Kuwaas tiirar ayaa isku uruuraya jajabyada haddii aan midkoodna la barbar dhigin. Marka hadafkeenu waa inaan iswaafajino tirooyin isku mid ah si ay isu darmaan. Isku-darkaas waxaa loo soo saari karaa si toos ah iyo xag-jir ahaanba, sidaa darteed caqligu wuxuu ku ciyaaraa caaraddiisa xujo-xuubka cusub ee loogu talagalay Android.
Isku day hargaha cusub si aad ugu raaxeysato qaab kale magaalada Hello Town 2048
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan Hello Town 2048 waa noocyo badan oo maqaar ah taas oo noo oggolaaneysa inaan u beddelno lambarradaas calaamadda nooca guriga ah ama taxane kale oo "naqshadeyn" ah oo runtii aad u wanaagsan. Taasi waa, waxaan bedeli karnaa mawduuca jajabyada.
Sida oo kale waxaa jira dhowr saameyn oo la soo saari karo markaan isku darno tirooyinka. Hadafku wuxuu ku saleysan yahay kartida iskudar tirooyinka si natiijada ka dhasha loogu daro kuwa kale. Sidan ayaan ku sameyn doonnaa iskudhafyo keena natiijooyin badan iyo lacag badan oo dahab ah sanduuqayaga.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee Hello Town 2048 waa taas uma baahnin isku xirnaan si aan u ciyaarno, inkasta oo aan kor ku hayno xayeysiis joogto ah (waan ka jaray shaashadda si looga fogaado in loo nijaaso waayo-aragnimada); laakiin waad heli doontaa marka aad ciyaareyso.
Halxiraale kugu xiisay
Iyo inta marka hore waxay u muuqan kartaa wax xoogaa yar, xilligan aan helno hangoolkiisa, waxaan awoodi doonnaa inaan isku darsano dusiyo si aan u dhammaystirno heerarka. Aynu nidhaahno waa inaad siisaa wakhti yar si aad u hesho makaanik kaas oo awood u leh inuu nagu dhejiyo ciyaartan.
Mid baa loo yeedhay Hello Town 2048 oo muuqaal ahaan aad ugufiican, laakiin iyada oo aan lahayn wax inaga dhigaya carrab la 'ama hadal la'aan. Marka la eego guud ahaan, waxay si buuxda u buuxinaysaa hawsha xujada mana jiraan wax wax u dhimaya ciyaarta, marka laga reebo waxa xayeysiinta joogtada ah ee culus.
Hello Town 2048 waa halxiraale tiro cusub taas oo ay tahay inaad isku darto dusiyeyaasha si aad u dhammaystirto 2048. Waxaad haysataa 3 xirfadood oo kaa caawinaya inaad ka gudubto heerarka oo aad sidaas u dhisto magaaladaada. Iyo hadaad jeceshahay lambarada ma seegi Sudoku kan.
Si aan waqti fiican u helno markii aan ku mashquulsan nahay isku darka tiles lambarada.
Wuxuu awood u leeyahay inuu kugu dhejiyo ciyaartiisa
Noocyada kala duwan ee hargaha iyo gunnada
HelloTown 2048 - Merge Tycoon
Developer: Eggtart Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ku dhis magaaladaada adoo isku daraya nambarada magaalada Hello Town 2048
Moto E7 Power waxaa lagu dhawaaqay Helio G25 iyo 5.000 mAh baytariga
Adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple ayaa hadda la jaan qaadaya Google TV